चेपुवामा सुनाकोठी- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
मंसिर ८, २०७५ दामोदर न्यौपाने
ललितपुर — हामी देख्छौं– बाटोमा मान्छे हिंड्छन् । गाईबस्तु हिंड्छन् । सवारीसाधन गुड्छन् । प्राचीन बस्तीका बाटोबारे बुझ्नुभयो भने यतिमा मात्रै सीमित छैन बाटोको उपयोगिता । यहाँ मान्छेका जीवन जोडिएका अनि संस्कार र संस्कृति पनि ।
चालीस वर्ष पहिलाको सुनाकोठी (बायाँ) र हालको सुनाकोठी ।
बाटोसँग जोडिएका पक्ष ख्याल नगरी अन्धाधुन्ध सडक विस्तार गर्दा हाम्रा प्राचीन बस्तीका सम्पदा, संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । यसको एउटा उदाहरण हो ललितपुरको प्राचीन बस्ती सुनाकोठी ।
सुनाकोठीका रामसुन्दर महर्जनको घर भूकम्पले भत्केको ३ वर्ष भयो । उनले घर बनाउने प्रयास गरे पनि नक्सापास नभएकाले रोकिएको छ । किन भएन नक्सापास ? उनी भन्छन्, ‘नक्सा पास गर्दा बाटो छोड्न भन्छन् । बाटो छाड्दा हाम्रो बस्ती मासिन्छ । बस्तीका परम्परा मासिन्छन् । बस्तीका सम्पदा मासिन्छन् ।’ रामसुन्दर महर्जनले पनि घर बनाउन प्रयास गरेको धेरै भयो । उनको पनि समस्या उस्तै छ । सातदोबाटो हुँदै चापागाउँतिर जाने सडकमा पर्ने सुनाकोठीवासीको साझा समस्या हो यो ।
४० वर्षअघिको सुनाकोठी बस्तीको बीचमा इँटा छापेको बाटो छ । यो मुख्य बाटो हो । अरू सहायक बाटा पनि छन् । मुख्य बाटोको दायाँबायाँ पेटी अनि दुवैतिर पेटीको बीचमा केही होचो भाग छ । होचोभागबाट वर्षातमा परेको पानी बग्ने गथ्र्यो । पेटी पनि इँटाले नै छापिएको छ । ‘यो पेटीमा कतै धान सुकाइएका हुन्थे, कतै खुर्सानी,’ आर्किटेक्ट इन्जिनियर पद्मसुन्दर महर्जन भन्छन्, ‘सुत्केरीले घाम ताप्ने ठाउँ पनि हो यो । बालबालिकालाई तेल लगाइरहेका दृश्य देखिन्थे । तर अहिले यो ठाउँमा बाक्लै सवारी गुड्छन् । त्यस्ता गतिविधि त एकादेशका कथा भए । बाटोले प्राचीन बस्तीको मौलिकता मासिदियो ।’
यति मात्रै होइन । यो सडकमा वर्षैभरि अनेक सांस्कृतिक गतिविधि भइरहन्छन् । ढोलाहिटीबाट सुरु हुन्छ सुनाकोठी । ढोलाहिटीदेखि कारकुटहिटीसम्मको क्षेत्र हो सुनाकोठी । ‘यो बीचमा पर्ने बाटोका धेरै सांस्कृतिक संकेत छन्,’ महर्जन भन्छन्, ‘सांस्कृतिक मार्गमा गाडी गुडाउँदा धेरै नै असर परेको छ ।’ न्हुँ दया (नयाँ वर्ष) मा लस्करै कोसेली लिएर हिंड्ने चलन छ यही बाटोबाट । गाईजात्रा, इन्द्रजात्रामा सापारु यही बाटोबाट जान्छन् ।
मंसिर पूर्णिमाका बेला हुने जात्रामा पनि यही बाटो प्रयोग हुन्छ । योमरी पुन्ही भनेर चिनिने मंसिर पूर्णिमाका दिन यहाँ छ : ख जात्रा हुन्छ । एउटा मात्रै खट निकालेर यो जात्रा मनाइन्छ । बालकुमारीको मन्दिरबाट निकालिएको खट यही बाटो भएर सहर परिक्रमा गराइन्छ । माघे संक्रान्तिको बेलामा पनि यो बाटोको रौनक बेग्लै हुन्छ । माघ संक्रान्तिको दिन बिहान घिउ, चाकु चढाउनुपर्छ । ‘यो दिन बिहानैदेखि बाटोभरि पूजा हुन्छ,’ महर्जन भन्छन् ।
होलीको बेलामा पनि पूजा हुन्छ यहाँ । यो दिन सस: पूजा हुन्छ । नेवारी परम्परागत गीत गाइँदै जात्रा मनाइन्छ । चैतको अन्त्यमा अर्काे ठूलो जात्रा हुन्छ । मंसिर पूर्णिमामा बालकुमारीको मात्रै एउटा खट निकालिन्छ । चैतमा भने चारवटा खट निकालिन्छ । बालकुमारी, महादेव, कुमार, गणेशका खट निकालेर यही बाटोबाट सहर परिक्रमा गराइन्छ । चारैवटा खट बोकेर पिङ्ग भन्ने ठाउँमा लगिन्छ । फर्काएर दही–चिउरा खुवाउने चलन छ । यो जात्रालाई महादेव परिवारको मिलनका रूपमा पनि लिइन्छ । जात्राको तेस्रो दिन तीन पटक परिक्रमा गराएर लिंगो ढालिन्छ । लिंगोको टुप्पोमा कागती राखिएको हुन्छ ।
यहाँको मुख्य केन्द्रमा भृगेश्वर महादेव मन्दिर छ । यहाँका पूज्य देवस्थलमध्ये यो मुख्य हो । गुम्बजशैलीको छ मन्दिर । चोकमा विशाल ढुंगा छापिएको छ । महर्जनका अनुसार उपत्यकाका मन्दिरमा भएका ढुंगामध्ये ठूलोचाहिँ यही मन्दिरमा छ ।
मन्दिरभित्र १२ फिट अग्लो ढुंगे त्रिशूल छ । ढुंगाकै बसाह छ । ढुंगे अभिलेख पनि छन् । अभिलेखमध्ये दुईवटा प्राचीन हुन् । नास द्यो: मन्दिर छ । तले शैलीकै जगन्नाथको मन्दिर पनि यहीं छ । भृगेश्वरकै छेउमा छ बालकुमारी मन्दिर । नेवारी कलाशैलीको बेजोड नमुना देख्न पाइन्छ यो मन्दिरमा । दुईतले यो मन्दिरमा तीनवटा धातुका छाना छन् ।
बस्ती कति प्राचीन ?
बस्तीलाई लिच्छविकालीन मानिएको छ । यसको प्रमाण भृगेश्वर मन्दिरमै रहेको महर्जन बताउँछन् । मन्दिर प्रांगणमा त्रिभुज आकारका इँटा छन् । पुरातत्त्वविद् सुदर्शनराज तिवारीका अनुसार यस्तो इँटा लिच्छविकालमा विकसित भएको हो ।
लिच्छविकालमा यो ठाउँलाई भृगरग्राम भनिन्थ्यो । महर्जन भन्छन्, ‘यही भृगेश्वर महादेवको नामबाट यसको नाम रहन गएको हो । भृगेश्वरलाई पशुपतिनाथभन्दा पुरानो मानिन्छ । भृगरग्रामलाई सुवर्णपुर पनि भनिन्थ्यो ।’
हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने कान्ति राजपथ बन्न सुरु भएको ६ दशक नाघ्यो । यो राजपथ बन्न सुरु भएदेखि नै सुनाकोठी, ठेंचो जस्ता प्राचीन बस्ती त्रासमा रहेको महर्जन बताउँछन् । सत्तरीको दशकमा सांस्कृतिक बाटोबाट गाडी गुड्न थाले । विस्तारै पिच भयो । माथिल्लो भेकमा क्रसर उद्योग खुले ।
त्यहाँबाट गिट्टी बोकेका टिपर दौडन थाले । टिपरको बेजोड हुइँक्याइले सडकमा निस्कन डरमर्दाे भयो । धूलो र धूवाँले कुहिरीमण्डल हुन थाल्यो । सडक जाम बढ्यो । दुई घण्टासम्म जाम हुन्थ्यो सडक । त्यसको विरुद्ध स्थानीयवासी संगठित भए । टिपर गुड्न दिएनन् । व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले व्यवसायीलाई हराइदियो । त्यसयता यो मार्गबाट टिपर गुड्न छाडे ।
कान्ति लोकपथ बढाउन टेन्डर
आह्वान भइसकेको छ । तलतिर ढोलाहिटीबाट डोजरले धमाधम घर भत्काइरहेका छन् । माथितिर चापागाउँ, लेलेतिर पातलो बस्ती छ । पातलो बस्ती भएको ठाउँमा सडक विस्तार गर्न सजिलो छ । ‘माथि पनि बढाउने, तल पनि बढाउने गरेर प्राचीन बस्तीलाई चेपुवामा पारिएको छ,’ महर्जन भन्छन्, ‘हामीले सडकको विरोध गरेका होइनौं । घर नमासिदेऊ । घरपछि जग्गा हो । तर हाम्रो कुरा सुनिएको छैन । घर बनाउन नक्सापास गरिएको छैन ।’ प्रकाशित : मंसिर ८, २०७५ ०७:५८
अभिभावकबाटै कुटिन्छन् बालबालिका
हिंसाका कारण उपत्यकामा दिनहुँजसो बालबालिकालाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइन्छ
मंसिर ८, २०७५ फातिमा बानु
काठमाडौँ — केही महिनाअघि लमजुङकी ३ वर्षीया बालिकालाई अचेत अवस्थामा राजधानीको कान्ति बाल अस्पताल ल्याइयो । घाँटीमा रातो डाम थियो, श्वासप्रश्वासमा समस्या थियो ।
चिकित्सकले बालिकाको यस्तो अवस्था कसरी भयो भन्नेबारे बुझ्न खोज्दा अभिभावकले घाँटीमा सल कस्सिएर यस्तो अवस्था भएको बयान दिए । चिकित्सकलाई भने अभिभावकको विश्वास नलागेपछि बालिकाको विशेष परीक्षण भयो । चिकित्सकले यो घटना प्रहरीमा उजुरी गरेपछि साँचो कुरा बाहिर आयो ।
श्रीमान् र श्रीमतीको झगडाको सिकार भएकी रहिछन् बालिका । उपचारक्रममा बालिकाको मृत्यु भयो । श्रीमान्सँग झगडा परेपछि आमाले बालिकाको घाँटी निमोठिदिएकी थिइन् । बालिकाकी आमा थुनामा छिन् ।
उपत्यकामा दुर्व्यवहारका कारण दिनहुँजसो बालबालिका उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइन्छ । तर अधिकांश घटनाबारे अनुसन्धान हुँदैन । न चिकित्सकले यसबारे सोध्छन्, न त बालबालिकाले आफूमाथि भएको कुटपिटको घटनाबारे बताउन सक्छन् । अस्पतालमा यस्ता बालबालिका आइरहन्छन् ।
कहिले प्रहरीले ल्याउँछन्, कहिले अभिभावकले त कहिले छिमेकीले पनि । सामान्य रगत परीक्षण र एक्सरेबाट पत्ता लाग्ने भए पनि यो अभ्यासमा छैन । यस्ता दुव्र्यवहारबारे छानबिन कसरी गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्यकर्मी नै अन्योलमा छन् ।
बालरोग विशेषज्ञ डा.सामना शर्मा भन्छिन्, ‘बिरामीको चाप बढी हुन्छ, शंका लाग्दा मात्रै हामी बालबालिकाको अवस्थाबारे विस्तृत बुझ्न भ्याउँछौं ।’ सरकारले यस्ता घटनाबारे छानबिन गर्ने नीति बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
दुव्र्यवहारबाट घाइते भएर अस्पताल ल्याइएका बालबालिकालाई अभिभावकले भर्ना गरी उपचार गर्न नमान्ने हुँदा घटनाको जरो पत्ता लगाउन अझ गाह्रो हुने उनी बताउँछिन् । उनी थप्छिन्, ‘यस्तो हुँदा बच्चाको उपचार त हुन्छ, तर न्याय हुँदैन ।’ महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा भर्ना भएका बालबालिकाबारे चिकित्सकले व्यक्तिगत रूपमा गरेको अनुसन्धानका अनुसार धेरैजसो बालबालिका स्कुलमा शिक्षक–शिक्षिकाद्वारा कुटिएर घाइते हुने गरेका छन् ।
यौन दुव्र्यवहार, कुटपिट र शारीरिक कुटाइका कारण बालबालिका नै भर्ना हुने अवस्थामा अस्पताल आइपुग्ने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । कानमा रगत जमेको, पानी र तेलले पोलेका घटनामा भने स्वास्थ्यकर्मीले सजिलै थाहा पाउने गरेको उनीहरूको अनुभव छ । थाहा पाइहाले पनि बालबालिकालाई न्यायसम्म पुर्‍याउने विशेष संयन्त्र नहुँदा उनीहरूमाथि हुने दुव्र्यवहार रोकिन सकेको छैन ।
बालबालिकामाथि हुने यस्ता दुव्र्यवहार पहिचानका लागि चिकित्सक र नर्सलाई विशेष तालिमको आवश्यकता रहेको बालरोग विशेषज्ञ डा.विष्णुरथ गिरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शरीरमा घाउ लिएर अस्पताल आउँछन्, यसबारे बच्चाले भन्न सक्दैनन्, अभिभावकले झुट बोल्छन् ।’ केही विशेष परीक्षणबाट घटना हो या दुर्घटना पत्ता लाग्छ ।’ बालबालिकामाथि हुने यस्ता दुव्र्यवहार रोक्न कानुन नै बन्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
चकचक र जिद्दी गर्ने बालबालिकाको बानी हुन्छ । उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न एक/दुई झापड नै लगाउनुपर्छ भन्ने अभिभावकको मानसिकता हुन्छ । यस्तै मानसिकताका कारण बालबालिका अपांग हुनेदेखि मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा बालबालिकाले तत्कालै उपचार र परामर्श पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । डा. गिरी भन्छन्, ‘कति बालबालिका त कुटिएको महिनौं दिनपछि मात्रै अस्पताल ल्याइन्छन्, शंका लागेमा हामी प्रहरीमा उजुरी दिन्छौं ।’ यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सरकारी संयन्त्र नै बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले विशेष समिति नै बनाउनुपर्ने बालरोग विशेषज्ञ डा. रामहरि चापागाइँ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो समितिमा चिकित्सक, कानुन व्यवसायी र फोरेन्सिक पनि संलग्न हुन जरुरी छ, उनीहरू सबैलाई तालिम पनि चाहिन्छ ।’
प्रकाशित : मंसिर ८, २०७५ ०७:५६
काठमाडौंमा चिसो वृद्धि
निर्मूल भइसकेको कुष्ठरोग थपिँदै
मालपोत कर्मचारीको इन्टरनेट सुस्त
जबरजस्ती करणीमा ८ वर्ष कैद
फोनिज युके पत्रकारिता पुरस्कार चाम्लिङलाई, फोटो पत्रकार तमु पनि पुरस्कृत